banner – osnepal tv
in banner, Main News
निर्वाचन अगाडि सबैलाई खोप लगाइने छः प्रम
in banner, Business
ओखर खेतीमा आकर्षण
बुधबार बिहान गएको ५.८ म्याग्नेच्युटको भूकम्पको केन्द्र लमजुङ, काठमाडौँमा पनि गरियो महशुस
काठमाडौँ । बुधबार बिहान गएको भूकम्पको केन्द्र लमजुङ रहेको राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रले जनाएको छ । बिहान बिहान ५ बजेर ४२ मिनेट जाँदा गएको भूकम्पको काठमाडौंसम्म धक्का महसुस गरिएको छथियो । राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रका अनुसार उक्त भूकम्पको केन्द्र लमजुङको भुलभुले रहेको थियो । भूकम्पबाट के कति क्षती भयो भन्ने कुराको विवरण आउन बाँकी छ […] More
by osnepaltvs May 19, 2021, 12:51 am
in banner, breaking, Main News
आज ६ हजार ६४८ जनाले कोरोनालाई जिते, मृतकको संख्या पनि घट्यो
काठमाडौं । आइतबार ७ हजार ३१६ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्ले २४ घण्टामा १९ हजार ५३९ पीसीआर परीक्षणमा ७ हजार ३१६ जनामा संक्रमण देखिएको हो । त्यस्तै पछिल्ले २४ घण्टामा ६ हजार ६४८ जना कोरोना संक्रमणमुक्त भएका े । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्तै, […] More
by osnepaltvs May 16, 2021, 11:00 am
भारतले नेपाललाई खोप नदिएपछि चीनबाट ल्याएको भेरोसेलको दोस्रो डोज आजबाट लगाउन सुरु, यि स्थानमा लगाइदैछ खोप
काठमाडौँ २ जेठ । कोरोना विरुद्धको चिनियाँ खोप भेरोसेलको दोस्रो डोज आज आइतबारबाट लगाउन सुरु भएको छ । वाग्मती प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले एक सुचना मार्फत काठमाडौं महानगरपालिकाको ३३ वटै वडामा खोप लगाइने जनाकारी दिएको हो । पहिलो पटक लगाएको खोपको कार्ड देखाएर आफ्नो नगरपालीकामा गएर खोप लगाउन सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ । आजबाट सुरु […] More
by osnepaltvs May 16, 2021, 7:19 am
ओली सरकारमा पुरानै अनुहार दोहोरीए
काठमाडौँ– नवनियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका छन् । नयाँ मन्त्रिपरिषद्मा पुरानै अनुहारलाई नै ओलीले दोहोर्‍याएका छन् । उनले यसअघि आफ्नो क्याबिनेटमा रहेका सबै मन्त्रीहरुलाई दोहोर्‍याउँदै शीतल निवासमा आयोजित विशेष समारोहका बीच राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शपथ गराएकी हुन् । ओलीसँगै उनको मन्त्रिपरिषदका सदस्यले पनि पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् । दोहोरिएका मन्त्रीहरूले […] More
by osnepaltvs May 14, 2021, 10:33 am
in banner, breaking, Main News, News
काठमाडौँमा कोरोना महामारी बढेसँगै आजबाट झनै गरियो कडाई
काठमाडौँ- पछिल्लो समय काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर कोरोना सङ्क्रमतिको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको भन्दै कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार बन्द हुने भएको छ ।तरकारी बजार विकास समितिले आज एक सूचना जारी गर्दै आजदेखि कृषक बजार बन्दको निर्णय भएको जनाएको हो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँको निर्णयअनुसार बजार बन्दको निर्णय भएको समितिका कार्यकारी निर्देशक विनोदकुमार भट्टराईले जानकारी दिनुभयो […] More
by osnepaltvs May 11, 2021, 10:43 am
in banner, Politics
केपी ओलीलाई अहिलेसम्मकै ठूलो झड्का, अन्तत माधव नेपाल समुहका सबै सांसदले दिए एकसाथ राजीनामा
काठमाडौं २६ बैशाख । अन्ततस् नेकपा एमाले फुट्ने निश्चित भएको छ । आजै वरिष्ठ नेता माधव नेपाल समुहका सांसदहरुले सामूहिक राजीनामा दिने भएका छन् । अहिले केही बेर अगाडी मात्र सुरु भएको नेपाल समुहको स्थायी कमिटिको बैठकमा सांसदहरुले अब राजीनामा दिएर मात्र अगाडी बढ्न बताएको बुझिएको छ । बैठकमा सहभागी भएका एक नेता दिएको जानकारी […] More
by osnepaltvs May 9, 2021, 9:30 am
केपी ओलीलाई माधव नेपाल समुहले यसरी दिँदैछ दनक, केपीको घमण्ड कहिलेसम्म ?
काठमाडौं २६ बैशाख । नेकपा एमालेका बरिष्ठ नेता माधव नेपाल समूहको स्थायी कमिटिको बैठक बस्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विश्वासको मत लिने दिन नजिकिँदै गर्दा आज नेपाल समुहको सांसदहरुले राजीनामा दिने विषयमा थप छलफल गर्न स्थायी कमिटिको बैठक बस्न लागेको हो । हिजो शनिबार साँझ बसेको बैठकले प्रधानमन्त्री तथा पार्टीका अध्यक्ष समेत […] More
by osnepaltvs May 9, 2021, 4:16 am
कोरोना महामारीले थलिएको भारतमा आज एकैदिन अहिले सम्मकै धेरै संक्रमित फेला, शब जलाउन ठाँउको अभाब !
काठमाडौँ– भारतमा कोरोना भाइरस संक्रमणको दैनिक वृद्धिमा फेरि नयाँ रेकर्ड कायम भएको छ । हिजो संक्रमितको संख्या केही घटेको भारतमा आज फेरी ह्रवात्तै बढेको छ । भारतमा पछिल्लो २४ घण्टामा ४ लाख १२ हजार ६१८ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ । एकैदिन संक्रमित हुनेको यो संख्या अहिलेसम्मको सबैभन्दा उच्च हो । एकैदिन संक्रमित हुनेको यो […] More
by osnepal tvp May 6, 2021, 2:50 am
एकाएक किन एमालेका प्रत्यक्ष निर्वाचित २१ सांसदले किन दिँदैछन् राजीनामा ?
काठमाडौँ २२ वैशाख । नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव नेपाल समुहका २१ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरुले सामुहिक राजीनामा दिन लागि तयार भएका छन् । हिजो मंगलबार बुद्धनगरमा भेला भएर नेपाल समुहले सामूहिक राजीनामाको पत्र तयार गरेका हुन् । हस्ताक्षर गर्ने सबै एमालेका सुर्य चिन्हबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरु रहेका छन् । जसमा कोरोना संक्रमण भएर […] More
by osnepal tvp May 5, 2021, 8:38 am
बैतडीमा जिप दुर्घटना हुँदा ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या छ पुग्यो, गाउँ नै शोकमा डुब्यो
बैतडी -बैतडीको पञ्चेश्वरमा मङ्गलबार भएको जिप दुर्घटनामा परी मृत्यु हुनेको सङ्ख्या छ पुगेको छ । पञ्चेश्वर गाउँपालिका–६ का ५० वर्षीय खेमसिंह भण्डारीको मृत्यु भएसँगै मृतकको सङ्ख्या छ पुगेको बैतडीका प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक नारायणप्रसाद अधिकारी जानकारी दिनुभयो । भण्डारीको मङ्गलबार बेलुका जिल्ला अस्पतालमा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । यसअघि पञ्चेश्वर–६ का ५० वर्षीय […] More
by osnepaltvs May 5, 2021, 3:38 am
विश्वकै अतिप्रभावित मुलुक भारतमा २४ घण्टामा ३ लाख ८२ हजार संक्रमित, ३७ सय ८६ को मृत्यु
काठमाडौँ– दोस्रो लहरको संक्रमणको ‘हटस्पट’ बनेको भारतमा पछिलो २४ घण्टामाथप ३ लाख ८२ हजारमा संक्रमण पुष्टि भएको छ ।विश्वकै अतिप्रभावित मुलुक भारतमा पछिल्लो २४ घण्टामा ३ लाख ८२ हजार ६९१ जनामा संक्रमण पुष्टि भएसँगै संक्रमितको संख्या २ करोड ६ लाख ५८ हजार २४३ पुगेको छ । यस अघि भारतमा १८ वैशाखमा कोरोना संक्रमितको दैनिक वृद्धि […] More
by osnepal tvp May 5, 2021, 1:59 am
ड रलाग्ने गरी बढ्यो नेपालमा कोरोना संक्रमण, पछिल्लो २४ घण्टामा भेटिए हालसम्मकै धेरै संक्रमित
काठमाडौँ – नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा ७ हजार ५ सय ८७ जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभरका प्रयोगशालामा गरिएको १६ हजार १ सय ३१ पीसीआर परीक्षणबाट ७ हजार ५ सय ८७ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको हो । जुन संख्या हालसम्मकै धेरै रहेको छ । यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको […] More
by osnepal tvp May 4, 2021, 11:37 am